UShenge ukhumbule uMnu Kaunda ngolokuzalwa - Ilanga News
Home Izindaba UShenge ukhumbule uMnu Kaunda ngolokuzalwa
UShenge ukhumbule uMnu Kaunda ngolokuzalwa
INKOSI Mangosuthu Buthelezi incokola noMnu Kenneth “KK” Kaunda emfisela unwele olude njengoba esanda kuqeda iminyaka ewu-97 edla anhlamvana.
IKHUMBULE uMnu Kenneth “KK” Kaunda ongu-mhlobo wayo owaba ngumengameli wokuqala wa-seZambia iNkosi Mangosuthu Buthelezi, yamlobela incwadi imfisela izilokotho ezinhle ngosuku lwa-khe lokuzalwa.
UMnu Kaunda osekusele iminyaka emithathu ukuba ahlanganise iminyaka ewu-100 yobudala, wahola leliya zwe kusukela ngo-1964 kwaze kwaba wu-1991.
Laba baholi bazana kudala iNingizimu Afrika isa-lwela inkululelo kanti iNkosi Buthelezi ibike iva-kashe kuleliya lizwe noma ithumele umuntu ozoyi-mela uma abeNgoni baseZambia begubha umkhosi weN’cwala uMnu Kaunda naye avame ukuwuha-mbela.
Incwadi yeNkosi Buthelezi ifundeka kanje:-
Mhlonishwa, kuyintokozo ukuphinda ngikufisele usuku oluhle lokuzalwa.
Siyambonga uNkulunkulu ngomunye unyaka abusise ngawo izwekazi lethu ngomholi onjengawe onobuhlakani.
Kulokhu kugubha kwakho lolu suku namhlanje nomndeni, sicela ulwamukele uthando esinalo ngawe.
Khona kuyathusa ukuthi uma sibuka ngonyaka owedlule sigcina ukuxhumana, umhlaba wawusu-qala ukugubuzelwa yiCovid-19.
Uhambo neCovid-19 belusaqala ngesikhathi ngikubhalela ngikufisela izilokotho ezinhle ngosuku lwakho lokuzalwa ngo-2020.
Manje simile la ngemuva konyaka sizama ukuthi abantu bathole umgomo walo mkhuhlane.
Kuyajabulisa ukubona ukuthi iZambia nayo na-mhlanje isiwutholile umgomo wayo wokuqala we-COVAX.
Njengokuba kwaziwa ukuthi nami ngike ngasuleleka ngegciwane lalo mkhuhlane (iCoronavirus) ngonyaka odlule ngoNcwaba (August), ngahlala ngazivalela, ngizibona ngibusisekile ukuthi ngiphinde nga-hlolwa kwatholakala ukuthi kanginalo.
Ngizibona ngingobusiseke kakhulu ngoba sila-hlekelwe ngabangani nozakwethu ngenxa yalo mkhuhlane.
Ngineqiniso lokuthi nakuwe kube kanjalo nje-ngoba lo nyaka bekuwunyaka omubi wokulahleke-lwa ngabathandiweyo bethu.
Singalibala kanjani wukudlula kweSilo samabandla uGoodwill Zwelithini Zulu, ukuhamba kwaso okusizwise ubuhlungu obungaphezu kokucabanga.
Kukho konke lokho, iNingizimu Afrika izilungi-selela ukuba nokhetho lohulumeni basekhaya ngoMfumfu (October).
Imikhakhaso eyandulela ukhetho siyazi sonke ukuthi iphazamisekile kakhulu futhi siyazibuza ukuthi kazi abavoti bazoya yini ezikhungweni zokuvota.
Nakuba kunjalo, siqhubekela phambili ngenxa yokuthi ohulumeni basekhaya bayinsika yentando yeningi.
Impela njengoba siqhubeka nokugubha iminyaka ewu-27 sakhululeka, sikhunjuzwa ukuzinikela nobuholi kwamazwe ayesekhaleni emzabalazweni wenkululeko.
Ubuholi bakho buphambili emqondweni wami futhi ngisasho namanje ukuthi sasingeke siyizuze le nkululeko ngaphandle kokwesekwa okungakaya. Ukwazi ukuthi nasenzelani siyisizwe, ngiyatha-ndaza ukuthi wena nomndeni wakho nibusiseke njengoba uzobe ugubha lolu suku lokuzalwa oluba-luleke kangaka.
weNkatha Freedom Party ngokuhlonishwa
Previous articleKushiswe ogandaganda abawu-4 e-rbm
Next articleUlahlwe ngelakubo ‘obebamba imoto yemali’